काँखीमुनि बसेको कालो धब्बालाई हटाउन चाहानुहुन्छ ? यी सजिला उपाय अपनाउनुहोस् – Khabar Silo
काठमाडौँ । सेविंङ ,वाक्सिङ र पसिनाका कारण काखी मुनिको भागमा कालो धब्बा बन्ने गर्दछ र नराम्रो देखिन्छ । अण्डर आमको यो समस्या आम महिलाहरुको समस्या हो । अण्डर आमको यो समस्या केही घरेलु उपचारबाट पनि समाधान गर्न सकिन्छ ।
१.हरेक दिन खानामा भिटामीन सि युक्त खानेकुराहरु जस्तै अम्बा,गोलभेडा,ब्रोकली,कीवी लिने गर्नुहोस । यसले छालाको दाग धब्बा र काखी मुनीको कालो भाग हटाउन मद्दत गर्दछ ।
२.एलोवेराको प्रयोग गर्नाले छालाको हाइपर पिगमेन्टेसन कम हुदै जान्छ र छाला सफा हुदै जान्छ । यसको शितलताले नयाँ कोशिकाहरुको निमार्ण हुने गर्दछ । एलोवेराको जेल अण्डर आममा लगाउनाले छाला नरम हुने र कालो भएको दाग सफा हुन्छ ।**भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला **
३.एक चम्चा बेकिंङ सोडामा गुलाब जल मिसाएर पेस्ट बनाउने । त्यसपछि कालो भएको भागमा हल्का मसाज गर्ने र पाँच मिनेटसम्म राख्ने त्यसपछि पछि हल्का मनतातो पानीले धुने ।
४.काचो आलुको टुक्रा अण्टर आममा दश देखि पन्ध्र मिनेटसम्म दलिरहने । त्यसपछि एक घण्टासम्म त्यसलाई सुक्न दिने । अनि मनतातो पानीले धुदा अण्डरआममा हुने कालो दागबाट छुट्कारा पाउन सकिन्छ ।
जिन्दगीलाई सुरक्षीत बनाउन हरेक महिना बचत गर्ने बानी बसाल्नुहोस्, यसरी सकिन्छ पैसा बचाउन
काठमाडौं । धनी बन्ने चाहना सबैको हुन्छ । तर, त्यो त्यति सहज पनी हुँदैन । आफुले कमाएको सानो रकमको सहिरुपमा सदुपयोग गर्ने हो भने धनी बन्न सकिन्छ । सहिसोच र अनुसासनका साथ काम गरे कम समयमा नै धनी बन्न सकिन्छ । मासिक बजेट छुटाउनु – धनी बन्नको लागि मासिक बजेट छुट्टाउने गर्नु पर्छ । यसबाट […]
Posted on February 27, 2021 Author khabar silo
तपाईले कहिले ध्यान दिनु भएको छ ? कानको बाहिरी भागका प्वाल हुन सक्छ । यो प्वाल यति सानो हुनसक्छ कि तपाईले यसमा ध्यान दिनु भएको छैन । यदी तपाइलाई विश्वास छैन भने कसैलाई आफ्नो कान देखाउनुस् । तपाईको कानको माथिल्लो भागमा सानो प्वालको निशान पाउनुहुनेछ ।यसलाई प्रीआरीकुलर साइनल भनिन्छ । धेरै जसो मानिसको यो प्वाल […]
तपाईले सपनामा यी ३ भगवानलाई देख्नुभयो ? हुनसक्छ भविष्यका लागि यस्तो संकेत
काठमाडौँ । सुतेको समयमा हरेक मानिसले सपना देख्नु एक सामान्य कुरा हो। हरेक दिन हामीले देखेको सपनाले हाम्रो जीवनमा ठूलो प्रभाव पार्ने गर्छ। अधिकाम्स मान्छेहरुले निन्द्राबाट बिउझिंदा आफूले देखेका सपनाहरु बिर्सिने गर्छन। त्यसैले उनीहरुलाई सपनामा देखेका कुराहरुले जीवनमा पारेको असरबारे थाहा हुँदैन। ज्योतिष शास्त्रका अनुसार हरेक सपनको केही अर्थ रहने गर्छ र यसले कुनैपनि व्यक्तिको […]